Ciyaaryahanadda Olombiga ee xijaaban oo ku dhiiri-gelisay gabdhaha dugsiga sare inay ciyaarta seefaha galaan
Catharine Richert ​| MPR News [In English]
Labo sannadood ka hor, ciyaarta seefaha kuma aysan jirin niyadda Ikhlas Cabdullahi, oo ah 15-jir.
Hase ahaatee, iyadoo xiranaysa qalab kor-illaa-hoos ah oo ilaalinaya inta aysan aadin tababar ay la qaadaneeyso kooxdeeda dhigta Rochester STEM Academy, ayay sheegtay in Olombigii 2016-kii ay taas beddeshay.
Ibitihaaj Muxammad oo horyaal ka ah ciyaarta seefaha ayaa noqotay haweeneeydii ugu horreeysay oo Muslim-Maraykan ah oo billad Olombig ah hesha. Waxay ku guuleeysatay billad naxaas ah iyadoo xidhan xijaab, masarka madaxa ee ay Cabdullahi iyana xidhato.
“Inta badan ma arkaysid dad kuu eg,” ayay tidhi. “Ma ahan ciyaar dad kala duwan ku jiraan. Waxaana igu dhiirri-geliyay inaan isku dayo markaan arkay qof aniga ii eg.”
Cabdullahi waa Muslimad diinta ku dhaqanta oo ay diinteedu ku waajibisay inay is asturto markii ay dibedda joogto.
Ciyaarta seefaha waa ciyaaraha tirada yare e ay Cabdullahi ka qeyb qaadan karto — taaso ay sababtay qalabkeeda. Jidhka oo dhan ayaa asturan marka laga reebo hal gacan.
Amina Axmed oo ay isku koox yihiin ayaa sheegtay inay eclaan jirtay inay ciyaaraha ka qeyb gasho intii aysan helin ciyaarta seefaha.
“Dhibaatadu waxay ahaan lahayd dharka haddii aan isku dayi lahaa ciyaaraha kale,” ayay tidhi.
Taasi waxay meesha ka saartay ciyaaraha ay ka midka yihiin kubbadda gacanta, kubbadda cagta iyo field hockey.
“Ma gashan karo surwaal gaaban, laakiin waan gashan karaa surwaalka dhaggan,”
Corlis Hicks, oo ah tababaraha ciyaarta seefaha ee STEM Academy, ayaa sheegtay in xidhoodku ahaa wax aad loo qiimeeyay markii uu iskuulku dhowr sano ka hor billaabay kooxda sagaalka gabdhood ah ee ciyaarta seefaha. Iskuulka charter-ka ah ardaydiisu waxay u badan yihiin Muslim, inta badan carruurtuna waa Soomaali-Maraykan.
Markii hore, Hicks waxaa ku adkaatay inay arday soo qorto kooxda.
“Qoysaskoodu waxay yidhaahdeen ‘maxaad dooneeysaa inaad sameeyso?’”
Faisa Mohamed, oo 15-jir ah, waalidkeed waxa ugu walaaca badnaa ma ahayn xishoodka — waxay ahayd seefaha.
“Waxaan u sheegayay hooyadeey markii aan iskuulka uu sii soconay maalintii ugu horreeysay tababarka, waxayna igu tidhi, ‘Ma samaynaysid saas! Waad dhimanaysaa! Waa lagugu mudayaa waana aad dhimaneeysaa! Uma oggolaan karo gabadheeyda inay dhimato.’”
Markii ay tustay waalidkeed in seefaha afkoodu uu yahay caag, waxay sheegtay inay ka heshay taageero buuxda.
Mohamed waxay sheegtay inay ciyaartan ku jeceshahay farxadda ay dareento markay seefteedu taabato garanka qofka la tartamaya. Taa waxaa la yidhaahdaa “taabasho” ama "touché" afka Faransiiska.
Waa dareen gabdhaha kale ee kooxda ku jira ay muujiyeen — waa waxa soo jiidashada badan leh oo ku dhiirriya inay ciyaarta ka qeyb qaataan tababarka iskuulka ka dib iyo safarrada dheer ee isbuuca dhammaadkiisa ay ku tagaan Magaalooyinka Mataamaha ah si ay u tartamaan.​
by Sara Porter, MPR News 6/2/2018 12:35:27 AM